08-28-2010 03:18 PM #11
[quote author=nyinyi27 link=topic=8718.msg58318#msg58318 date=1278851129]
မြစ်ကြီးနား ဝိစိတ္တသာရဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အများသိနေတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်း ဂိုဏ်းချုပ်မဟာယာနဂိုဏ်းဝင် အပြာရောင်ဝတ် ဓမ္မဝိဟာရီ အရှင်ဥာဏရဲ့ တရားတော်အမှားတွေကို အဓမ္မဝါဒအဖြစ်စီစစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်လိုပါက မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်နဲ့ စာရိုက်ပေးခဲ့သော မန်ဘာဝင်တွေကိုသာ ကျေးဇူးတင်ကြပါခင်ဗျာ..သူတို့က အပင်ပန်းခံရိုက်ပေးပြီး ကျွန်တော်ကဒေါင်းပြီး အခုပြန်တင်ပေးရုံလေးပဲရှိတာပါ..ညီအစ်ကိုတို့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ..
ဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းပါ ( ပတ်စ်ဝပ် - အမ်အီးအက်ဖ်)(627.36 KB)
်မဟာယာနဂိုဏ်းဝင် လို့ သုံးထာတာက တော်တော်လေးကို မှားနေပါတယ်။
အရှင်ဥာဏရဲ့ တရားတော်အမှားတွေကို အဓမ္မဝါဒအဖြစ်စီစစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ ဆိုတာမှာလည်း ဟုတ်သလိုဖြစ်ပေမယ့် ချော်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဆရာတော်တို့ ဖြစ်ခဲ့ တုန်းကနဲ့မြစ်ကြီးနား ဆရာတော်တို့ ဖြစ်ပုံခြင်းက မတူပါဘူး။ ဘယ်လိုမတူတာလဲ ဆိုတော့ ဆရာတော်တို့ တုန်းက သာသနာတော်ရေး လျှောက်ထားတောင်းဆိုလွှာဆိုပြီး ဆက်ကပ်ရင်းကနေ တော်တော်လေး ကို အကြိတ်အနယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဝိနိစ္ဆယလုပ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဗဟိုတရားရုံးက တရားနိုင်ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဝိနိစ္ဆယ အထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ မြစ်ကြီးနား ဆရာတော်ကြတော့ သက်ကာယ ဒိဋ္ဌိ ရှင်းတမ်းဆိုတာ ရေးရင်းကနေ စဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မြစ်ကြီးနားဆရာတော်ဟာ ဝိနိစ္ဆယ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ၀န်ခံတာ တစိုးတစိမှာ မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သက်ကာယ ဒိဋ္ဌိ ရှင်းတမ်း ဆိုတာကို သင်္က၀တ် အ၀ါနဲ့ တုန်က တင်ပြတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ ဝိနိစ္ဆယ ဟာ အ၀ါ ၀တ်ချိန်မှာပင် ကျန်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
&quot;Remember, remember / The fifth of November / The gunpowder treason and plot. / I know of no reason / Why the gunpowder treason / Should ever be forgot&quot;.
12-27-2014 05:47 AM #12
down လို့မရလို့ link တချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါလားခင်ဗျာ
Originally Posted by nyinyi27
ဒီကောင်လေးကတော့ နည်းနည်းဆိုက်ကြီးလို့ ခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..PW ပါထည့်လိုက်ပါတယ်...ထုံးစံအတိုင်း အများစွဲမက် MEF ပါပဲ
ဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းလိုက်ပါ ( 69.8 Mb)
Quick Navigation စာအုပ်များ Top
By တေဇဟိန်း in forum စာအုပ်များ
Last Post: 08-17-2012, 03:03 PM